Home News Dablihii dilay Wasiir Cabaas Sh. Siraaji oo dhawaan la sii dayndoono
Dablihii dilay Wasiir Cabaas Sh. Siraaji oo dhawaan la sii dayndoono
Gacan ku dhiiglihii sida bareerka ah u dilay Allaha u naxariisto Wasiirkii hore ee Hawlaha guud Cabbaas Cabdullaahi Sheekh ayaa lagu wadaa in dhawaan la sii deeyo. MW Farmaajo oo horay balan u qaaday beesha habar-gedir ee uu ka dhashay Dable Axmed Cabdullaahi Caydiid oo ahaa ninkii dilka geysaty ayaa Farmaajo kulan kale la yeeshay maalintii shalay. Waxaana uu balan qaaday in uu sugayay fursad si degan oo shacabka dareemin in loo sii daayao Ceydiidi.
Farmaajo ayaa yiri “ waxaan idinkaaga mahadcelinaya dulqaadka aad ii muujiseen iyo sabarkiina, balanta waxa ay ahay in mar hore la sii daayo Dable Ceydiid, laakiin waxaan ka baqay in beeshii uu ka dhashay igu kacaan, in badan oo ka mid xilal ayaan ku qancinay qaarka kale ee soo harayna mar dhaw ayaan xalinaynaa.. Ku bishaareeysta Dable Ceydiid dhawaan ayaa la sii dayndoonaa”
Qaar ka mida xildhibaanada oo in mudo muujinyaayay in ayan marnaba nasanaynin ilaa cadaalad la marsiiyo dadkii ka danbeeyay dilka Wasiir Siraaji ayaa la iibsaday? Waxaana ugu horeeya oo qadiyadii Wasiir Siraaji iibsaday Xildhibaan Adan Isaaq oo dhawaan wasiir ku xigeen laga dhigay? Qadiyadda Siraaji waxa ay u arkayeen uu jaranjaro xil lagu raadsado. Adan Isaaq iyo kuwa la midana taariikhda ayaa xusi doonto
Previous articleRW Kheyre: “Baarlamaanka Soomaaliya ee aad sheegeysaan waa beec”
Next articleRW Kheyre ayaa adeerkiis qandaraas ku siiyay quudinta Ciidanka Qalabkasida
Xog:-Maxeey Aheed Sababtii Wasiir Cawad Looga Reebay Safarkii Qatar,yaasa ka Dambeeyay!!
Farshaxamiiste caan ka ahaa Soomaaliya Oo Magaalada Nairobi ku Geeriyooday